Howlgallo Amniga Lagu Xaqiijinayo oo Kasii Socda Gaalkacyo – Goobjoog News
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa weli kasii socda baaritaanno ay sameynayaan ciidamada ammaanka, kaas oo lagu xaqiijinaayo amniga magaalada, sida ay sheegayaan wararka aan helayno.
Ciidamada xoogga dalka iyo nabadsugidda ayaa saaka waxaa ay si gaar ah u baarayaan xaafadda Carafaad ee magaalada, iyadoo dadka shacabka aysan kasoo bixi karin guryaha, laguna amray in ay ku nagaadaan hoygooda.
Waxaa sidoo kale saaka hakad ku jira waxbarashada jaamacadda weyn ee Gaalkacyo oo ku taallo isla xaafadda waxaana ardaydu ay yihiin kuwa aan aadain jaamacadda, waxaana macquul ah in gelinka dambe dib loo fasaxo.
Baaritaannada guud ee magaalada ayaa waxaa ay imaanayaan iyadoo muddooyinkii dambe xaaladda amni ee Gaalkacyo ay sii xumaanaysay, waxaana dhowaan ka dhacay qarax ismiidamin ah xili ay socotay soo dhoweyn.
Wasiir Beyle “Hantida Dowladda si Qaldan Doorashada looguma isticmaali Doono"